किशोर नेपाल काठमाडाैं, २८ पुस
संवैधानिक र सरकारी तहमा यो पटक पृथ्वी जयन्ती धूमधामसँग मनाइयो । समारोहको अगुवाइ गरेको थियो नेपाली सेनाले । समारोहलाई रोचक बनाउने सन्दर्भमा कतिपय नाटकीय दृश्यहरू समावेश गरिए ।
राज्य विस्तारका लागि पृथ्वीनारायण शाह हिँडेको गोरेटो पछ्याउँदै नेपाली सेनाले गोर्खा–काठमाडौं ट्रेलमा पदयात्रा गर्‍यो । राष्ट्रिय एकता दिवसका दिन बडामहाराजाको प्रतिमामा चढाउन लामो मालाको व्यवस्था गर्‍यो ।
बडामहाराजाको प्रतिमालाई चार घोडे बग्गीमा राखेर नगर परिक्रमा गराइयो । उहिले नेपालमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत शासन भएको अवस्थामा प्रतिमा राखेको बग्गीमा प्रधानमन्त्री बस्ने चलन थियो ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री रोगी छन् । उनको शरीरमा आफ्नै मिर्गौला छैनन् । अर्काको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ । त्यसले पनि काम नगरेर डायलाइसिस मेसिनमा राखेर उपचार सुरू गरिएको छ ।
बडामहाराजाको जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने आधिकारिक निर्णयमाथि कुनै टिप्पणी गर्नु छैन । बडामहाराजा मात्र देशका एक मात्र त्यस्ता राजा हुन्, जो साँच्चिकै योद्धा थिए । उनका उत्तराधिकारी कसैले पनि लडाइँ खेल्नु परेन । बडामहाराजाले आर्जन गरेको राज्यमा छोरा निष्क्रिय भएर, नाति जोगी भएर राज्य चलाए । त्यसपछिका अरू जम्मै राजाहरू राणाका कैदी भए ।
कैदमा भए पनि उनीहरूलाई मोजमज्जाको अभाव थिएन । सराव, शवाव र कवाव भएपछि भइहाल्यो । देशमा प्रजातन्त्र नआएको भए त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले समेत शासन गर्न पाउने थिएनन् ।
अन्ततः शासन यिनै चार राजाले गरे– त्रिभुवनले थोरै, महेन्द्रले पनि थोरै नै, वीरेन्द्रले केही धेरै र ज्ञानेन्द्रले थोरै । शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र भए । उनले नारायणहिटी छाडे पनि नागार्जुनमा बस्न पाए । अहिले पनि बेलाबेलामा सन्देश दिन्छन र शासन गर्ने आफ्नो दमित इच्छाको प्रदर्शन गर्छन् ।
सेनाको पनि कुरा उही हो । पृथ्वीनारायणको प्रतिमालाई जतिसुकै नगर परिक्रमा गराए पनि यसको इमान–जमानमा त्यति बेलै दाग लागिसकेको छ, जतिबेला राजाको गद्दी धरापमा पर्‍यो । त्यसलाई धरापबाट निकाल्ने प्रयास किन भएन र कसले गरेन ? त्यो सबैलाई थाहै छ ।
यस पटक महान् नेपाली सेनाको संयोजनमा जुन जोडतोडका साथ र जुन धूमधामका साथ पृथ्वी जयन्ती मनाइयो, त्यसले मेरो मनले एउटा नीतिवचनको सम्झना गरेको छ– अतिभक्ति चौर्यस्य लक्षणम् ।
यसको सामान्य भावार्थ हो– जो चोर हुन्, तिनले आफ्नो मालिकको अति भक्ति गर्दछन् । यसो भनेर मैले महान् नेपाली सेनाको मान–मर्दन गर्न खोजेको होइन ।
देशका बुद्धिजीवीहरूले महान् नेपाली सेनालाई नेपालको एक मात्र बलियो ‘संस्था’ (इन्स्टिच्युसन) का रूपमा हेरेका छन् । त्यस्तो महान् संस्थाले गरेको बडामहाराजाको जयन्ती मनाउने कामलाई ‘अतिभक्ति’ को रूपमा उल्लेख गर्नु कुनै हालतमा पनि सही होइन । तर, यथार्थ यही हो ।
नेपाली सेनाले गरेको अनेक प्रकारका व्यापारिक काम देखेर, ठेकेदारी देखेर, चाकरी देखेर अर्थात् सैैनिकले गर्न नहुने भनिएका सबै गैरसैनिक व्यक्तिले गर्ने व्यापारिक काममा त्यो संस्थाको नेतृत्व लिप्त भएको देखेर त्यो संस्थाप्रति सम्मानको भाव नै आउँदैन मनमा ।
नेपाली सैनिक नेतृत्वको द्रव्यमोहको नाङ्गो उदाहरण जनताले देख्दै र भोग्दै आएका छन् । ठेक्कापट्टा र बन्द व्यापारमा अप्रत्यक्ष लगानी गर्दै आएको छ सेनाले । सेनाले सरकारसँग ठेक्कामा लिएको कुनै पनि आयोजना भ्रष्टाचारमुक्त छैन ।
जाजरकोट–डोल्पा मोटरबाटो खोल्ने काममा भएको भ्रष्टाचार होस् अथवा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणको प्रक्रियामा होस्, निजामती प्रशासनमा जस्तै सैनिक प्रशासनमा पनि भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ ।
सेनाको कुरा लेख्न निषेधजस्तै गरिएकाले सञ्चारमाध्यमहरू यी विषयमा हात नै हाल्दैनन् । त्यसैले सेनाभित्रका भ्रष्टाचार गुम्सिएका छन् ।
२०७२ को भुइँचालोले नयाँ सडकको ढोकासँगै जोडिएको देशको सुप्रसिद्ध मिलिटरी हस्पिटल धराशयी भयो । अहिले त्यो भवनको पुननिर्माण भइसकेको छ । पहिलेको भन्दा अग्लो बनेको छ हस्पिटल भवन ।
पुरानै भवनको पुनर्निर्माण गरिएको जस्तो पनि देखिँदैन । यो भवनको निर्माण लगत कति हो ? कसैले भन्न सक्दैन । सेनाले लिएका आयोजनामा लागतभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने बताउँछन् जानिफकारहरू ।
अहिले त्यो नवनिर्मित भवनमा साविक मिलिटरी हस्पिटल नराखेर ‘शपिङ मल’ बनाउने तयारीमा लागेको छ सेनाको नेतृत्व । जसले जे भने पनि सेनाको यो निर्णय सही होइन । यसले महान् नेपाली सेनाको बाँकी प्रतिष्ठाको पनि विनाश गर्नेछ ।
विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनेपछि निजामती प्रशासनमा सेनाको भूमिका प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा बढेको छ । हाम्रो यो सानो देशमा पहिलेदेखि नै धेरै कुराहरू इशारा र संकेतले बुझ्ने गरिएको छ ।
नेताहरूमा दूरदृष्टिको अभाव, राजनीतिक अपरिपक्वता र चरम सत्तालिप्साले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राजनीतिक संक्रमणको अवस्था पार गर्न सकेको छैन । चुनावमा लोकतान्त्रिक शक्तिको कहालीलाग्दो पराजयले राजनीतिक सन्तुलन हराएको छ । सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संकीर्ण दृष्टिकोणले देशलाई उल्टो बाटोमा हिँडाउने खतरा बढेको छ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पदचिन्ह पछ्याउने खालका कानुन र नियमहरूको तर्जुमाले जनताको मनमा सन्त्रास फैलिएको छ ।
यो अवस्थामा सेनाका महत्त्वाकांक्षी पदाधिकारी र राष्ट्रपतिका आशा र आकांक्षाका बीच मेलमिलाप भयो भने देशका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २८, २०७६, ०३:२५:००
राहत : पीडितलाई आहतमाथि आहत !
स्वास्थ्यकर्मीकाे मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा पनि ख्याल गराैँ
प्रदेश १ मा २ हजार ८ सय जना क्वारेन्टाइनमा
ताज फालेर कोरोनाका बिरामीको उपचारमा होमिइन् सुन्दरी
दराजले अत्यावश्यक सामग्री घरदैलोमै पुर्‍याउने गर्‍यो घोषणा
जगदम्बा समूहका कार्यकारी निर्देशकको घर र कार्यालयमा प्रहरीको छापा
काेराेना राेकथामका लागि नेपालले लियाे विश्व बैंकबाट २ करोड ९० लाख डलर ऋण